16 / 01 / 2019 | RayHaber | raillynews
Maalin: Janaayo 16, 2019
Calaamadaha Horukaca leh Rinjiga Xaraaradda iyo Labada Labaad ee Rugaha Waddooyinka
Calaamado Hordhac leh oo leh rinjiyeynta xargaha iyo Sawirka Qeybaha Wadnaha Wadnaha oo ka dhashey jilitaanka TCDD 7aad ee Maareeyaha Gobol ee qarashka ugu sarreeya ee TCC lambar 2018 TL oo loo diray Agaasime Goboleed ee Waddooyinka Waaweyn 178515 (KGM) 30.668.435,00/4 [More ...]
Madaarka Adnan Menderes Airport Cusbooneysiinta Dhismaha Dhisidda Dhulgariirka
Adnan Menderes Muuqaalka Dhul gariirka Adkeynta Qalabka Cusbooneysiinta Qandaraasyada Guud ee Hay'ada Duulista Hawada ee Dawlad Goboleedka (DHMİ) 2018/460239 Dibudhiska Dhulgariirka Adnan Menderes oo qiimahiisu qiyaastii yahay 26.988.486,61 TL. [More ...]
TÜDEMSAŞ Goolka waa in la helo Wax-soo-saarka Wagaa-soo-saarka Boqortooyada Boqolkiiba hal boqolkiiba
Iyada oo hogaamineysa TÜDEMSAŞ, daraasadaha ku saabsan ku saabsanaanta 100 ee soosaarida gawaarida xamuulka ayaa sii socota iyaga oo aan gaabin. Baabuur ee ugu muhiimsan ee u baahan qof si uu shuqulka wax soo saarka ka mid ah qaybaha farsamada hababka kala jejebiyey macmalay ee Turkey [More ...]
Kahramanmaras North Ring Road 3. Marxaladda Heerka Horumarinta
3, 'Northern ring Road', oo ay dhisme ka socoto Dowlada Hoose ee Magaaladda Kahramanmaraş. Daraasadaha marxaladda ah waxay ku socdaan xawaare buuxa. Waxay xiriirineysaa Degmada Dulkadiroğlu iyo Onikişubat District waqooyiga Kahramanmaraş. [More ...]
TCDD 3. Agaasimaha Gobolka Koçbay oo booqanaya NGO-yada
TCDD 3. Agaasimaha Gobolka Selim Koçbay wuxuu booqday goobaha shaqada ee ururada samafalka ee ka hoos shaqeeya TCDD. TCDD Izmir 3. Maareeyaha Gobolka Selim KOÇBAY Kaaliyaha Maareeyaha Gobolka ee 15.01.2019 [More ...]
Istaraatiijiga Gaadiidka Erdogan: Ha Iskujirin Magaalooyinka Nidaamyada Tareenka
Xaqiiqdii, için Sida laf-dhabarta gaadiidka dadweynaha, nidaamka tareenka wuxuu umuuqdaa inuu yahay xalka ugu muhiimsan ee magaalooyinka sida Bursa oo ka kora bari ilaa galbeed. Si kastaba ha noqotee,… Nidaamyada tareenka ayaa sidoo kale leh qaybo u gaar ah. Nalalka Bursaray [More ...]
Wax ka bedelida Xeer-ilaalinta iyo Xarunta Imtixaanka Tareenka
Qaanuunka Wax ka Beddelka Xeerka Tababarka Tareenka iyo Xarunta Imtixaanaadka waxaa lagu daabacay Gazette Rasmiga ah oo taariikhaysan Janaayo 15 oo lambar 2019 - lagu celceliyey. KHUDBADKA WAXBARASHADA IYO XEERARKA Imtixaanaadka [More ...]
Wax ka bedelidda Xeerka Badbaadada Tareenka
Sharciga ku saabsan wax ka badalida sharciga tareenka wadada waxaa lagu daabacay Rasmiga Rasmiga ah ee taarikhdu tahay 15ka janawari 2019 waxaana la tiriyay 30656 - waa lagu celceliyay. XEERARKA KU SAABSAN AQOONSIGA SHAQAALAHA AMMAANKA RAILWAY 1 - 19/11/2015 [More ...]
18 ee Isgaadhsiinta Saxaafadda ee Pantone
18 waxaa loo qabtay munaasabaddan 'No Pants Subway Ride' inkasta oo cimilada qabow ay ka jirto New York, Germany, Berlin, London, England iyo Amsterdam, Netherlands. Tobaneeyo adduunka [More ...]
Dacwad-oogaha Sordu, TCDD Tilmaamo Joogta ah
13 ee Ankara Diseembar 2018 Xeer ilaaliyaha Guud ee Ankara Oğuz Ejder Özdemir, oo sameeyay baaritaan ku saabsan shilka tareenka ee sababay dhimashada 9, ayaa weydiiyay TCDD su'aalo kala duwan. Su'aalahan, laba hay'adood oo kala duwan oo TCDD ah [More ...]
Garoonka diyaaradaha ee Istanbul Airport ee 5 2. Wejiga la furay
Wejigii labaad ee Duty Free (Duty Free Shops), oo lagu soo gabagabeeyey garoonka diyaaradaha Istanbul, ayaa maanta la furay xaflad. Munaasabadda ayaa waxaa ka soo qeyb galay Funda Ocak, Maareeyaha Guud iyo Gudoomiyaha Maamulka Garoomada Diyaaradaha ee Gobolka. [More ...]
Tareenka Rakaabka ee Kutahya Lagu Qaadey Mashiinka Shaqada! 1 Dadka Dhiman
Kütahya, Balıkesir-Kütahya tareenka rakaabka ee ka gudbaya isgoyska heerka aan la xakameyn ayaa ku dhacay mashiinka dhismaha. Shilka, darawalkii mashiinka ayaa ku dhintay goobta. Tareenka rakaabka ah ee ka baxaya Balıkesir una sii jeeda Kütahya, Demirciören ee Kütahya [More ...]
4 Bin 118 Daraaseynta Dariiqa Wadada ee Mugla
Kooxaha Magaalada Caasimadaha Mupolla ee gobolka oo dhan waxay sii wadaan shaqadooda sumadda / tooska ah. Kooxo ka socda Dawlada hoose ee Magaalada Mu ,la, oo u kuur gala baaxadda jihada safka toosan iyo taagan ee laga fuliyey wadooyinka gobolka oo dhan, qabanqaabada wadooyinka, calaamadaha digniinta [More ...]
RayHaber 16.01.2019 Warbixinta Shirka
Adeegga Badbaadinta Gaarka ah ee Iibsashada Adeegga Ijaarka Gawaarida ayaa la Imanayaa